မမဆောင်းရဲ့နာမည်သုံးလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနာမ်ပါတဲ့ မင်းသားကိုသိချင်လွန်းနေတာကြောင့် ဗီဒီယိုကောလ်ခေါ်ကာ မရမကမေးလိုက်တဲ့ ချယ်ရီသင်း – Cele Snap
မမဆောင်းရဲ့နာမည်သုံးလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနာမ်ပါတဲ့ မင်းသားကိုသိချင်လွန်းနေတာကြောင့် ဗီဒီယိုကောလ်ခေါ်ကာ မရမကမေးလိုက်တဲ့ ချယ်ရီသင်း
August 14, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်က မမဆောင်းက နာမည်သုံးလုံးနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနံမင်းသားမှ သူမကို အရမ်းလှကြောင်း ပြောခဲ့ကြောင်း အသိပေးလာခဲ့ ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်တွေကလည်း နာမည်သုံးလုံးနဲ့ မင်းသားကိုအရမ်း သိချင်နေတာကြောင့် စုံစမ်းနေကြပါတယ်နော်။
မမဆောင်းရဲ့ ဂဟက်ကတော့ အနုပညာလော ကမှာလည်း အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေပါတယ်နော်။ မမဆောင်းကတော့ ဘယ်သူလဲဆိုတာ အခုထိ မပြောပြသေး ပါဘူးနော်။ အဆိုတော် ချယ်ရီသင်းမှလည်း အဆိုပါ နာမည်သုံးလုံးနဲ့ မင်းသားကို အရမ်းသိချင်နေပါတယ်တဲ့နော်။
နာမည်သုံးလုံးနဲ့ မင်းသားဘယ်သူလဲဆိုပြီး ချယ်ရီသင်းတစ်ယောက် မမဆောင်းကို ဗီဒီယိုကောလ်ခေါ်ပြီး မေးမြန်းနေပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးရော မမဆောင်းပြောတဲ့ မင်းသားနာမည် ကို မသိချင်ကြဘူးလား….
ပရိသတျကွီးရေ လှနျခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးလောကျက မမဆောငျးက နာမညျသုံးလုံးနဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးနံမငျးသားမှ သူမကို အရမျးလှကွောငျး ပွောခဲ့ကွောငျး အသိပေးလာခဲ့ပါတယျနျော။ ပရိသတျတှကေ လညျး နာမညျသုံးလုံးနဲ့ မငျးသားကိုအရမျး သိခငျြနတောကွောငျ့ စုံစမျးနကွေပါတယျနျော။
မမဆောငျးရဲ့ ဂဟကျကတော့ အနုပညာလော ကမှာလညျး အရမျးကို နာမညျကွီးနပေါတယျနျော။ မမဆောငျးကတော့ ဘယျသူလဲဆိုတာ အခုထိ မပွောပွသေးပါဘူးနျော။ အဆိုတျော ခယျြရီသငျးမှလညျး အဆိုပါ နာမညျသုံးလုံးနဲ့ မငျးသားကို အရမျးသိခငျြနပေါတယျတဲ့နျော။
နာမညျသုံးလုံးနဲ့ မငျးသားဘယျသူလဲဆိုပွီး ခယျြရီသငျးတဈယောကျ မမဆောငျးကို ဗီဒီယိုကောလျချေါပွီး မေးမွနျးနပေါတယျနျော။ ပရိသတျကွီးရော မမဆောငျးပွောတဲ့ မငျးသား နာမညျကို မသိခငျြကွဘူးလား….
စားဝတ်နေရေး အမှန်တကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အိမ်များကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အောင်လေး
အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန် တစ်မိုးအောက်မြန်မာပရဟိတအသင်းကို အလှူငွေများလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ရန်အောင်
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ အရင်လိုမိသားစုတွေစုံစုံလင်လင်မရှိတော့တာကြောင့် ၀မ်းနည်းနေကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ပြေတီဦးရဲ့ညီမ ငွေတီဦး
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေပြန်လည်ကျန်းမာလာတာမြင်ရင် သူမကိုယ်သူမအပြင်တစ်မိကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့ နန်မြတ်ဖြိုးသင်း
ဒီကနေ့မှာ အသက် (၂၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ ပြည်သူချစ်မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်
မြန်မာပြည်ကနေတစ်ယောက်တည်းလာနေရတဲ့ ချွေးမလေးရဲ့မွေးန့လေးကို အံ့သြပျော်ရွှင်သွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်းရဲ့ယောက္ခမ
အောင်လရဲ့အကောင့်မှာ မအလပုံပြောင်းထားခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းမှန်ကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း